ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဆောင်းရာသီနေ့စွဲအကြံဉာဏ်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 26 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
နွေရာသီ၏ပူနွေးသောနေ့ရက်ကာလကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ပျော်စရာပြင်ပတွင်ရက်စွဲအတွေးအခေါ်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေများပေး, ဒါပေမယ့်ရာသီပြောင်းလဲရန်နှင့်ဆောင်းတွင်းလေတိုက်နှုန်းကောက်အဖြစ်, များစွာသောစုံတွဲကပိုပြီးခက်ခဲသည့်အခါ၎င်း၏အအေးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရက်စွဲအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက် လာ. ရန်တွေ့စေခြင်းငှါ, မိုးရာသီ, နှင့်, တခါတလေ, ပြင်ပနှင်းဖုံး. ဒီမှာအပြင်ဘက်မှာပူနွေးမကပင်အခါသင်နှင့်သင့် Sweety တောက်လောင်အကြားသူတွေကိုနွေးထွေးသောခံစားချက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီငါးခုဆောင်းတွင်းရက်စွဲအတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း.
ဆောင်းရာသီနေ့စွဲ Idea #1: ရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်း
scarves နှင့်လက်အိတ်အတွက်ထုပ်နှင့်အချို့သောပျော်စရာဆောင်းတွင်း-အချိန်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ပြည်တွင်းရေခဲအမြန်စကိတ်စီးဖို့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ယူ. အေးသောရာသီဥတုကြောင့်, သင်နှင့်သင့်တနွေးထွေးတဲ့လအတွင်းအတူတကွသင်တို့ကိုဆောင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသောအောက်ဒိုးရက်စွဲလှုပ်ရှားမှုများအချို့တက်စေခြင်းငှါငါပေးပြီချစ်၏. ကိုယ့်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းတွင်းကြောင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ကိုမစွန့. ရေခဲပြင် Skating ရင်ခုန်စရာဖြစ်နိုင် (လက်ကိုကိုင်ပြီး, သူမကလဲသောအခါသူမ၏ကောက်နေ) အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့ကြီးပြင်ပတွင်လေ့ကျင့်ခန်း.
ဆောင်းရာသီနေ့စွဲ Idea #2: ခရစ္စမတ် ​​Light ကိုကြည့်
ခရစ်စမတ်မီးလုံးကြည့်ရှုသင့်ရပ်ကွက်အတွင်းလှည့်ပတ်မောင်းနှင်ရန်နေ့စွဲစီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ္စမတ်ရာသီအတွင်း decorating အားလပ်ရက်အိမ်၌ရှိသမျှ၏အားသာချက်ကိုယူ. သင့်ရဲ့ကားထဲတွင်နွေးနိုင်, ခရစ္စမတ်သီချင်းသို့မဟုတ်တီးလုံးရင်ခုန်စရာနားထောင်ခြင်းနှင့် sparkling ရောင်စုံမီးလုံးများနှင့်ပွဲလမ်းသဘင်အလှဆင်နှင့်အတူတောက်ပ lit အိမ်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းမျှဝေ.
ဆောင်းရာသီနေ့စွဲ Idea #3: အဆိုပါမီးလောင်မှုအားဖြင့် Snuggling
တစ်တောက်သောမီးများ၏ရှေ့မှောက်၌အချို့သောပူနွေးစောင်အောက်မှာစုဆောင်းထက် ပို. စိတ်ကူးယဉ်သည်အဘယ်သို့? သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတွင်မီးဖိုရှိပါက, တစ်ဦးမီးများ၏ရှေ့မှောက်၌အချို့သော cuddle အချိန်ဖြုန်းဖို့သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူနေ့စွဲပါစေ. သင်သည်ပူချောကလက်အောင်နှင့်အိမ်တွင်မီးဖြင့်နွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာနေတဲ့မီးဖိုသုံးခွင့်ရှိသည်မပြုလျှင်, မီးဖိုနှင့်အတူတစ်ဦးကဖီးသို့မဟုတ်တည်းခိုဖို့သွားနှင့်မီးနွေးထွေးမှုပျော်မွေ့နေစဉ်အချိုပွဲနှင့်ကော်ဖီမျှဝေ.
ဆောင်းရာသီနေ့စွဲ Idea #4: အားလပ်ရက်လက်ဆောင်ပေးမယ်စျေးဝယ်ခြင်း
အားလပ်ရက်ဆုလက်ဆောင်စျေးဝယ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများလုပ်ဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နေစရာမလိုဘူး. သင်ကပျော်စရာစုံတွဲလှုပ်ရှားမှုသို့သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ဆုလက်ဆောင်စျေးဝယ်ဖွင့်နိုင်. အဓိကသော့ချက်ကအလင်းနှလုံးစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်. သင်အကြိုက်ဆုံးကုန်တိုက်သို့မဟုတ်ဈေးဝယ်စင်တာ၌ဈေးဝယ်ရာနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပါ, နည်းနည်းထိုင် unwind နိုင်ရန်အတွက်အကြား၌တစ်ဦးနှင့်အတူနေ့လယ်စာစား. လက်ဆောင်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ကွန်ရက်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူလိုက်, ဒီနေရာမှာသို့မဟုတ်မရှိသောအရာတို့ကိုကောက်နေ – သင်forÖthisစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆီသို့ဦးတည်နိုင်ရှာကြအရာအားလုံးရှာဖွေဖို့အစီအစဉ်များဖြင့်မလိုက်မသွားဘူး. သင်လက်ဆောင်လိမ့်မည်သည့်အခါကြိုတင်အတွက်ဝေးသင့်စျေးဝယ်ရက်စွဲစီစဉ်ထားကြောင်းသေချာပါစေ, သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဝိုက်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အချိန်ကြာနိုင်အောင်.
ဆောင်းရာသီနေ့စွဲ Idea #5: တစ်ဦးနှင်း Fight ရှိသည်
လေးလံသောဂျာကင်အင်္ကျီအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထုပ်, သင့်ရဲ့ဆီးနှင်းဖိနပ်တက်ဇာ, နေ့အဘို့အမိုဃ်းပွင့်သို့ပြင်ပမှနေကြကြောင်း. သင်နှင့်သင်ချစ်တဦးတည်းသောနေ့ရက်ကာလကိုသုံးဖြုန်းနိုင်
အဆောက်အအုံ snowmen, မိုဃ်းပွင့်ကိုကောင်းကင်တမန်အောင်, and Play Snowballs တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိခြင်း. သင်သည်တတ်နိုင်နေစဉ်ဆီးနှင်းခံစားပျော်မွေ့, ထိုသို့လူအပေါင်းတို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လည်မှာကပ်မထားဘူး, နောက်ဆုံးတော့. ဒါဟာလေ့ကျင့်ခန်းရရန်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းင်နောက်မှအချို့ကိုသင်ပူကိုကိုးများအတွက်အိမ်တွင်းဦးနိုင်.
သတိရ, ရာသီဥတုချမ်းအေးလှည့့်ကြောင့်ဆိုသော်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရက်စွဲများသူတို့ရဲ့နွေးထွေးမှုကိုချွတ်ခြင်းရှိသည်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. သင်ကနှင်းဖုံးင်သောအခါ၌ပင်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးပျော်ရွှင်စရာနှင့်ရင်ခုန်စရာအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်, လှိုင်းလေထန်တဲ့, သို့မဟုတ်ရေခဲ. မိုဃ်းပွင့်နှင့်ရေခဲ Skating အတွက်ပျော်စရာအတူဆောင်းတွင်းရာသီဥတုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး, မီးကိုရှေ့တော်၌နွေး, နှင့်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ခရစ္စမတ်အလင်းအကြည့်နဲ့တူအားလပ်ရက်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ရန်နှင့်သင့်ဆောင်းတွင်းသင့်ရည်းစားနှင့်အတူနွေးထွေးပျော်ရွှင်အမှတ်ရစရာအပြည့်အဝဖြစ်ဖို့သေချာသည်.
5 သင့်အိပ်မက်ရဲ့အချင်းမိန်းမဆွဲဆောင်ဖို့ Action အကြောင်းသိကောင်းစရာများ